श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि बैशाख २० गते सोमबार, तपाईको राशिफल जान्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि बैशाख २० गते सोमबार, तपाईको राशिफल जान्नुहोस्
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि बैशाख २० गते सोमबार, तपाईको राशिफल जान्नुहोस्
Poonam May 2, 2021 May 2, 2021 धर्म सँस्कृति, राशिफल	0
व्यक्तिगत काममा समय र धन खर्च हुनेछ । काममा वि घ्नबाधा उपस्थित हुन सक्छन् । काममा ढिला सुस्ती आउनुका साथै आर्थिक हानी हुन सक्छ, सावधान रहनु होला । भौ तिक सा धनका पनि क्ष ति होला । अहिलेको समस्या तत्काल समाधान नहुन सक्छ । केहि रुपैँया पैसा भने खर्च गर्नुपर्ने छ ।
नयाँ काममा मन जानाले गरिरहेको काम ओजेलमा पर्ला । तपाईले अरुलाई गर्नु भएको बाचा पुरा हुने दिन रहेको छ । काम गर्नमा नै समय बिताए मन खुशी नै रहे पनि सोचे जती फाइदा हुने छैन । टाढिएका आफन्तको या दले पिरोल्नेछ । अन्य कुरामा सुखले साथ दिनेछ । समयको भने बचत गर्नुहोला ।
आयआर्जनमा राम्रो दिन छ । केहि नयाँ काम गर्नको लागि परिवारजनको राम्रो सल्लाह आउने देखिन्छ । नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ । व्यापारमा राम्रै धन लाभ हुनेछ । नउठ्ने पैसा पनि उठ्ने दिन छ । लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्नेछन् । आम्दानीमा कमी हुने छैन । नसोचेको ठाँउबाट धन आउने दिन छ ।
आज गरेको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा बढी मन जाने देखिन्छ । साथीभाइले काममा सहयोग जुटाउनेछन् । रचनात्मक काममा जुट्ने समय छ । सामान्यतया दिन एकदम राम्रो छ । साझेदारी र सट्टापट्टामा विशेष लाभ मिल्नेछ । मन त्यसै त्यसै फुरुङ्ग हुने समय छ, धनको लाभ हुनेछ ।
हात ह ति या रबाट जोगिनु पर्ने दिन छ । अनावश्यक वा द वि वा द मा परिएला । विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । कडा प्रायस गरेपनि सफलता हात लाग्ने बेलामा बा द वि वा द हुन सक्छ । कसैसँग बढी रिस पनि उठ्ला । काममा आलस्य जाग्ने र खर्चको मात्रा बढ्ने देखिन्छ, भने कसैसंग मनमुटाव हुन सक्छ ।
काममा मन नजानाले कामहरु अधूरै रहने सम्भावना छ । मान सम्मानमा आघात पर्ने देखिन्छ । नयाँ कामको सुरुवात खासै राम्रो छैन । कार्यमा हैरानी बढ्न सक्छ । जागिरमा पनि समस्या हुने दिन छ । श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ । काममा ढिलाई भइ सोचेको काम नबन्न सक्छ ।
चल अचल सम्पत्तिको कारोवार हुन सक्नेछ । वैवाहिक जीवन सुखी हुने खालको दिन छ । सामाजिक काममा नेतृत्वदायी भुमिकामा खटिनु पर्नेछ, यसले मान प्र तिस्ठामा राम्रो हुनेछ । पारिवारिक आवश्यकता पूर्ति होला । घर परिवारमा राम्रो सम्बन्ध बन्नेछ । दिन मनोरन्जनका साथ बित्नेछ ।
प्रेममा सुखद मिलनको अनुभव गर्न सक्नु हुनेछ । प्र यत्न गर्दा व्यावसायिक काममा सामान्य फाइदा उठाउन सकिनेछ । परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने छ साथै साहित्यिक कार्यमा मन जाने छ । टाढाको यात्राबाट धनको लाभ पनि होला । वाहन चौपाया आधीको कामबाट फाइदा हुने देखिन्छ ।
स्वास्थ्यले साथ नदिन सक्छ, सावधान रहनु होला । यात्राका क्रममा होस राख्नु राम्रो हुन्छ । पिडा दिनेहरु सक्रिय रहन सक्छन्, एकदमै सा वधा न रहनु होला । सामान्य रुघाखोकीले पनि सताउला । स्वास्थ्य कमजोर रहनाले काम गर्न नसकिएला । नसोचेको ठाँउमा धनको नाश हुने दिन छ ।
कामहरु आज सजिलैसँग बन्नेछन् । आर्थिक लाभ मिल्ने खालको समय छ, कसैबाट समर्थन पनि पाइएला । बुद्धि बिबेकले राम्रो काम गर्नेछ । अनायासै ठिक निर्णय हुनेछ । कसैबाट समर्थन पनि पाइने दिन छ । पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा होला । केहि अधुरा काम सम्पन्न हुनेछन् । पढाइमा मन जानेछ ।
व्यापार व्यवसायमा उन्नती हुनेछ । आ त्म विश्वास र पराक्रममा वृद्धि भइ धन ला भ हुने दिन छ । आँटे गरेको कार्यमा सफलता मिल्नुका साथै आर्थिक फाइदा भइ मन ह र्षि त हुनेछ । आफुले सोचेभन्दा बढी नै लाभ हुने दिन छ । निर्माण तथा व्यवहारिक क्षेत्रमा मन लाग्नेछ । मन लाएर काम गर्नु होला ।
आर्थिक काम बन्छ तर काम गर्दा भने धेरै नै जोगिनु होला । यात्राको योग छ । घ रायसी स मस्या ले सताए पनि गरेका काम सफल हुनाले मन स न्तुष्ठ रहने छ, यात्रा पनि हुन सक्छ । खर्च लागे पनि लामो यात्रा गर्ने अवसर जु ट्न सक्छ । सानो प्रयासले रो किएको काम बन्नेछ । आ म्दा नीको स्रोत समेत बढ्नेछ ।
१५ वर्षीया एलिशा कान्ति बाल अस्पतालमा ब्लड क्यान्सरसँग लड्दै : सकेको सहयोग गराैं
अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर छट्पटाइरहेकि आमालाई छोरीले आफ्नै मुखबाट दिइन् अक्सिजन (भिडियो सहित)
आज शुक्रबार, यसो गरे आर्थिक लाभ मिल्नेछ
पौष महिनामा चम्किनेछ यी राशिहरूकाे भाग्य, हेर्नुहाेस् २०७६ साल पौष महिनाको समग्र ग्रहगोचर र राशिफल
०७६ साउन १४ गते मंगलबार ई. स. २०१९ जुलाई ३० तारिख, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्य
गर्भवती रहेकी उपमेयर आशाको पेटको बच्चा पनि रहेन्, मंगलवार छोडिन् संसार
दासढुंगा घ ट ना बारे ब ल्ला खु ल्यो र ह स्यः यसरी मा रि एका रहेछन् अमर लामा
भारतिय नागरिकले वा नेपाल प्र हरी मा थि ढु ङा मु ढा गरे प्र हा र (भिडियो हेर्नुस्)
कोरोनाले उर्जावान बनाएका युवाहरू, 100’s Group मार्फत अभावहरूमा साथ दिदै राजधानीका सडकहरूमा (भिडियो हेर्नुस्)
०७८ साल जेष्ठ ०४ गते मंगलबार, तपाईहरूको राशि अनुसारकाे भाग्यफल यस्तो छ हेर्नुहोस...
०७८ जेष्ठ ०३ गते सोमबार, तपाईहरूको राशि अनुसारकाे भाग्यफल यस्तो छ हेर्नुहोस...
खुसीको खबर ! नेपालमा एकै दिन यति धेरै संक्रमित निको भए, भारतमा पनि तिब्र गतिमा घटे संक्रमित